သင်ကား မ၀ယ်ခင် ဒါလေးအရင် ဖတ်ကြည့်ပါ - ACHITLWINPYIN
March 14, 2018 Kwee Thiha အထွေထွေဗဟုသုတ 0
မျက်မြင် ကား သွားဝယ်မယ့် အမျိုးတွေ အတွေးမမှား ဈေးမများစေဖို့ ဒါလေးဆောင်ထား အကြမ်းအားဖြင့် တော့ မမှားနိုင်တော့ပါ
၁။ ကား ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ရရှိပြီး အရိပ်အောက် သက်တောင့်သက်သာ ကြည့်နိုင်သော နေရာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး နေ့လည့်ခင်း နေပူအောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း ရှောင်ပါ အပူဒါဏ် ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် ကားကြည့်ရှုသောအခါတွင် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်လို့ စစ်ရမှာတွေ ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ အပူဒါဏ် သက်သာအောင်ဆိုပြီး ညနေဘက်နဲ့ မိုးချူပ်ပိုင်းတော့ ကား ကြည့်ဖို့ မလုပ်ကြပါနဲ့နော် သဘောပေါက်ပါ ရေထဲ ပိုက်ဆံ လွင့်ပြစ်လိုက်ရင်တောင် အသံမြည်ဦးမှာပါ..
၂။ ကား ကိုတွေ့တာနဲ့ ကားထိုင်ခုံခါးပတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ ခါးပါတ်ခေါင်းတွေမှာ ထုတ်တဲ့ ခုနှစ်တွေ အတိအကျ ရေးထားပါတယ် ဖြဲထားတာမျိုး ၊ ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ထားတာမျိုး မဖြစ်ရပါဘူး ကြည့်တာနဲ့ တွေ့ရပါမယ် ကားပိုင်ရှင် ပါးစပ်က ဘယ်နှခုနှစ်ပါလို့ အမြုတ်ထွက်အောင်ပြောနေလဲ ကျွန်တော် တို့ မျက်စိရယ် ဦးနှောက်ရယ်နဲ့ဘဲ အလုပ်လုပ် ကြရမှာဖြစ်လို့ … ကျန်တာတွေ ခဏ မေ့လိုက်ပါ
၃။ ကား ကို စက်နှိုး ပါ ပြီးတာနဲ့ အဲကွန်း ဖွင့်လိုက်ပါ စက်သံသည် ဆူညံ ကျယ်လောင် တာမျိုးကို တော့ ခွဲတတ်ပါစေ ပြီးလျှင် အဲကွန်းလေအေးမအေး စစ်ပါ
၄။ ကား အစီးတိုင်းမှာ Wheel Tax ပါပါတယ် ပါတဲ့ Wheel Tax ဖရိန်နံပါတ်နဲ့ ကားမှာ တကယ်ပါသော နံပါတ် တူညီမှု ရှိမရှိ အရင်စစ်ပါ၊ ကားမှာ တပ်ထားသော ဖရိန် chassis နေရာသည်လည်း သန့်ရှင်း သပ်ရပ်နေရပါမည် ဖြတ်ဆက်ဆိုလျှင် ကားဝယ်ပြီးတာနဲ့ ဆုံးသွားပါလိမ့်မည် ကညန သိမ်းပါလိမ့်မည်။
၅။ ပြီးရင် ကားရှေ့ဘက်ပိုင်း ကားနောက်ဖက်ပိုင်း မီးခွက်နေရာတွေစစ်ပါ မီးလုံး အရောင်တူညီမှု ရှိမရှိ နေရာအထိုင် မူလီတွေ မူလီရောင်ဘဲ ရှိရပါမည် ကားဆေး ကူးနေခြင်း လုံးဝမရှိစေရ မူလီက မူလီလိုဘဲ ညစ်ပတ်လို့ ရပေမယ့် ကားဘော်ဒီ ဆေးမကူးစေရ
၆။ ကားဘီး သဲကာများသည်လည်း နဂို သဲကာအတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ညစ်ပတ်နေပေမယ့် သပ်သပ် ရပ်ရပ် ရှိနေရပါမည်။
၇။ အရေးကြီးဆုံးက ကား ရဲ့ အောက်ပိုင်းနဲ့ အင်ဂျင်ခန်း က ဖရိန်တွေသည် သန့်ရှင်းနေရပါမည် ။ အများစု သည် ပုံမှန်အရောင် ပုံမှန်ကာလာဖြစ်ရမည် ပြန်မှုတ်ထားပါက သူတစ်နေရာတည်းကွက် ဖြူနေတတ်ပါသည်။ ကွက်နေတိုင်း လည်းယူလို့ ရတာတွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ကားကောင်းရင် ကောင်းတဲ့ဈေး မကောင်းရင် လည်း မကောင်းနဲ့ဈေးဘဲ ပေးနိုင်ဖို့ စစ်ခိုင်းတာပါ
၈။ လူတွေသတိမထားဘဲ ကျော်ကျော်သွားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကား အစိတ်အပိုင်း တွေကတော့ ကားခြေနင်းပြားအောက် ကိုလှန်ကြည့်ဖို့ နောက်ဖုံး အခင်းပြားအောက် ခွာကြည့်ဖို့ လုံးဝအားမနာပါနဲ့ အားနာ လို့ သံချေး လိုက်နေရင် ကိုယ့်လည်ပင်း ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီသာ မှတ်လိုက်ပါတော့ သံချေး ရှိတဲ့ကား အလွန်ဆုံး ၁ နှစ်လောက်ဘဲ ကောင်းမှာပါ
၉။ ကီလို မှန်မမှန် စစ်နိုင်ဖို့ကတော့ အကြမ်းအားဖြင့် မှတ်သားရမှာကတော့ ကား ကီလို တွေရဲ့ အသက်က ဖင်ထိုင်ခုံနဲ့ စီယာရင် ထိုင်ခုံခါးပါတ်လို့ အကြမ်းဖြင်းမှတ်ပါ ၊ ကီလိုများရင် အားလုံးနွမ်းတတ်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် တချို့ ဂျပန်ကား တွေ ကလည်း ဂျပန်ကနောက်ဆုံးပိုင်ရှင် အကိုင်အတွယ်ကြမ်းတမ်းရင် ကီလို သုံးသောင်း နဲ့လည်း စုတ်ပြတ်သတ်နေတာကို မြင်ဖူးပါတယ်
၁၀။ တချို့ကလည်း တိုက်ကား ဘယ်လိုခွဲမလဲ မေးကြပါလိမ့်မယ် ဂျပန်မှာ တိုက်ကား အားလုံးကို Recondition လုပ်ပြီးရင် ဒီအတိုင်း စစ်လို့ မရတော့ပါ ဘာလို့ ဆိုတော့ တိုက်မိသမျှ ပျက်စီးသမျှ အကုန်အသစ်လဲ လိုက်သောကြောင့်ပါ ဒါကြောင့် ကန်ဆယ်လေးရှင်း အမှန်ဆိုရင် ကားဝယ်ယူသူတွေက တန်ဖိုးထားကြရတာပါ။
၁၁။ ဘာကြောင့် ကန်ဆယ်လေးရှင်း အမှန်တွေ ရောင်းကားထဲမှာ မရှိတာလဲ အများစုမေးပါလိမ့်မယ် ဘယ်ရှိမလဲဗျာ ကားတစ်စီးကို ဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ပြီးဝယ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ကန်ဆယ်လေးရှင်း အမှန်ဈေးနဲ့ အစုတ်အပြတ်ဈေး ဂျပန်မှာ တချို့ဆို သိန်း လေးငါးဆယ် ကွာနေတာမို့ ဘယ်သူမှ ကားကောင်းကို သွင်းမရောင်း နိုင်တော့တာပါ … ဒါကြောင့် ကားကောင်းဆို စီးမယ့်ဆိုပြီးသွင်းတဲ့ လူတွေ ပြန်ရောင်းမှသာ ရှိတော့တာပါ တကယ်စီးမယ့်သူတွေက သူတို့ကားကီလိုများရင်တောင် မကြိုက်ကြပါဘူး ကျန်တာဆို စဉ်းစားမနေပါနဲ့…
၁၂။ ကားအရောင် တန်းမှာ မြန်မာပြည်အကြိုက်က အပေါ်ဆုံး အမြင့်ဆုံးဈေးက အဖြူ အမည်းပါ ပြီးရင် ကြားအရောင်လို့ ခေါ်တဲ့ မိုးပြာတို့ ရွှေအို တို့ လာပါတယ် ပြီးရင် အရောင်ပျက်လို့ ခေါ်တဲ့ ဓါတ်တိုင်ရောင်တို့ အပြာတောက်တောက် အနီတောက်တောက် အရောင်တွေကိုတော့ သခင်ချစ်ကား ချစ်လွန်းလို့ကိုယ့်နားက တော်တော်နဲ့ မသွားဘူး လို့ မှတ်သားထားပါ အရောင်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ကား တိုင်းအတွက် တော့ မတူနိုင်ပေမယ့် အကြမ်းဖျင်းကတော့ အရောင်တွေကို လိုက်ပြီး ဈေးနှုန်းက ၁၀ သိန်းလောက် ကနေ ပိုကွာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ် ဓါတ်တိုင် Silver အရောင်ပျက် ဆိုပြီး 99 Surf တို့ 99 Prado တို့ကိုတော့ သွားမလုပ်နဲ့နော် သူတို့ပုံစံ နဲ့ ငွေရောင်ဆို ကောင်းတာမို့ အဲ့လိုကားတွေမှာတော့ အရောင်ပျက်လို့ မခေါ်နိုင်ပြန်ပါဘူး
၁၃။ ကား ၀ယ်ယူမည့်လူတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ တွန်းရောင်းတတ်တာလေး တစ်ခုကတော့ 2WD /4WD ကိစ္စပါ လိုအပ်တဲ့လူအတွက် လေးဘီးယက်ဆိုတာ လိုပေမယ့် လူ များစု နဲ့ ဆီစားနှုန်းသက်သာဖို့ အတွက်ကတော့ လေးဘီးယက်တွေဟာ ဖြုတ်မရဘဲ ၂၀ ကီလို နင်းမှ ပြုတ်တဲ့ဟာ ဆိုရင်တော့ ဆီစားမယ် ၊ ပြန်ရောင်းရင် ခက်မယ်ဆိုတာကိုပါ လုံးဝတွက်ထားပါ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တောင်တန်း မြေသားလမ်းတွေအတွက် ( ကတ္တရာလမ်းမပါ ) လေးဘီးယက်ကားအသုံးဝင်ပေမယ့် မြေပြန်လမ်းတွေအတွက်ကတော့ မလိုအပ်တာမို့ ဒီတစ်ချက်ကိုလည်း ချင့်ချိန်ပါ 2WD /4WD နှစ်မျိုးရွှေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ ပုံမှန် အိမ်စီး ကားအများစုမှာ 4WD ကားတွေက လေလံ မှာကိုဘဲ သိန်း 20 ကနေ သိန်း 40 လောက်ထိ သက်သာ နေတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်.
၁၄။ ကား ကိုစစ်ရင် နောက်ခန်းလည်း ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ် နောက်ခန်းကိုလည်း သေချာစစ်ပါ ကား မှာပါတာ Orginal ဟုတ်မဟုတ် သန့််ရှင်းမှု ရှိမရှိ အသုံးပြုထားသေးလား ဘီး ဂျိုက် ဂွ တွေ ပါတာတွေပေါ့ဗျာ … အများအားဖြင့်တော့ ဂျပန်ကလာရင် အသုံးမပြုရသေးတာ များပါတယ်
၁၅။ ကား ကိုလည်း စစ်ပြီးပြီ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင်တော့ မောင်းသာ စမ်းပေတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့ အားမနာပါနဲ့ ပိုက်ဆံ ရိုက်ထုတ်တဲ့ စက်လည်း မိတ်ဆွေတို့ ဆီမှာ မရှိနိုင်ပါဘူး ကိုယ့်ချွေးနဲစာဆိုတော့ ထောင့်စိအောင်တော့ စစ်ကြပါ။
၁၆။ နည်းမျိုးစုံ စစ်လို့မှ ကိုယ်ကြိုက်နေပြီ ၀ယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ရောင်းသူ အိမ်ကိုလိုက်ပြီး စရံ ဒါမှမဟုတ် အကြေ ချေလို့ရပါတယ် … စာရွက်စာတမ်း ကို မသင်္ကာသေးဘူး ဆိုရင် မြင်သာရုံး ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးဝန်ထမ်းတွေဆီမှာ ကားစသွင်းတဲ့ ငယ်ရုပ် စစ်ပြီးမှသာ ငွေ ချေပေါ့ဗျာ
နောက်ဆုံး တစ်ခုက မနေ့က ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ပြောသလို အမြင်ဝယ်ရင်တော့ ကားကောင်းကောင်း ကြိုက်တတ်ရင် ဈေးကောင်း ကောင်းသာ မျှော်လင့်ဖို့နဲ့ ကားကောင်းကောင်းရဲ့ အရင်းဟာ ကားစုတ် တစ်စီးကို အမြတ်တင်ရောင်း ထားတဲ့ ဈေးထက်တောင် မြင့်တတ်တယ် ဆိုတာ နားလည်မှသာ ကိုယ်သုံးမယ့် ငွေ ကိုယ်ရမည့် ကားကို မှန်းနိုင်ကြမှာပါ၊ အောက်တန်းဈေး တစ်ခုနဲ့ အထက်တန်းစား ကားတစ်စီးကို ယေဘူယျ အားဖြင့် တော့ မရနိုင်ကြပါဘူး။
ပေါချောင်ကောင်းလိုချင်တဲ့လူတွေနဲ့ လောလော လောလော အလုပ် လုပ်တတ်တဲ့ ကားဝယ်ယူသူ တွေဟာ ကား တစ်စီးကို ဈေးတန်းမှန်မှန် ကားမှန်မှန်မရတတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် သတိထားကြပါ ကျွန်တော်အခု ပြောပြတာတွေက ငွေနဲ့ လဲခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ စစ်စစ်တွေကို ပြောပြနေတာပါ ထောက်ခံစရာမလိုပါဘူး ငြင်းခုံလို့လည်း အကျိုး မရှိပါဘူး သူတပါးအကျိုးစီးပွားအတွက် မိမိ အတွေ့အကြုံ ကို နောက်လူတွေ မမှားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီစာကို အချိန်ပေးရေးသားပါသည် မိတ်ဆွေတို့ သူတော်ကောင်းတရား နေရာတိုင်းမှာ ထွန်းကား ပါစေ. ချစ်ခြင်းစေတနာ မေတ္တာဖြင့် ဖြန့်ဝေပါသည်။
မကျြမွငျ ကား သှားဝယျမယျ့ အမြိုးတှေ အတှေးမမှား စြေးမမြားစဖေို့ ဒါလေးဆောငျထား အကွမျးအားဖွငျ့ တော့ မမှားနိုငျတော့ပါ
၁။ ကား ကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ အလငျးရောငျ ကောငျးကောငျး ရရှိပွီး အရိပျအောကျ သကျတောငျ့သကျသာ ကွညျ့နိုငျသော နရော ဖွဈရမညျဖွဈပွီး နလေ့ညျ့ခငျး နပေူအောကျကွညျ့ရှု့ခွငျး ရှောငျပါ အပူဒါဏျ ပွငျးထနျလှနျးသဖွငျ့ ကားကွညျ့ရှုသောအခါတှငျ သကျတောငျ့သကျသာ မဖွဈလို့ စဈရမှာတှေ ကနျြခဲ့တတျပါတယျ။ အပူဒါဏျ သကျသာအောငျဆိုပွီး ညနဘေကျနဲ့ မိုးခြူပျပိုငျးတော့ ကား ကွညျ့ဖို့ မလုပျကွပါနဲ့နျော သဘောပေါကျပါ ရထေဲ ပိုကျဆံ လှငျ့ပွဈလိုကျရငျတောငျ အသံမွညျဦးမှာပါ..
၂။ ကား ကိုတှတေ့ာနဲ့ ကားထိုငျခုံခါးပတျကို ဆှဲထုတျလိုကျပါ ခါးပါတျခေါငျးတှမှော ထုတျတဲ့ ခုနှဈတှေ အတိအကြ ရေးထားပါတယျ ဖွဲထားတာမြိုး ၊ ကတျကွေးနဲ့ ဖွတျထားတာမြိုး မဖွဈရပါဘူး ကွညျ့တာနဲ့ တှရေ့ပါမယျ ကားပိုငျရှငျ ပါးစပျက ဘယျနှခုနှဈပါလို့ အမွုတျထှကျအောငျပွောနလေဲ ကြှနျတျော တို့ မကျြစိရယျ ဦးနှောကျရယျနဲ့ဘဲ အလုပျလုပျ ကွရမှာဖွဈလို့ … ကနျြတာတှေ ခဏ မလေို့ကျပါ
၃။ ကား ကို စကျနှိုး ပါ ပွီးတာနဲ့ အဲကှနျး ဖှငျ့လိုကျပါ စကျသံသညျ ဆူညံ ကယျြလောငျ တာမြိုးကို တော့ ခှဲတတျပါစေ ပွီးလြှငျ အဲကှနျးလအေေးမအေး စဈပါ
၄။ ကား အစီးတိုငျးမှာ Wheel Tax ပါပါတယျ ပါတဲ့ Wheel Tax ဖရိနျနံပါတျနဲ့ ကားမှာ တကယျပါသော နံပါတျ တူညီမှု ရှိမရှိ အရငျစဈပါ၊ ကားမှာ တပျထားသော ဖရိနျ chassis နရောသညျလညျး သနျ့ရှငျး သပျရပျနရေပါမညျ ဖွတျဆကျဆိုလြှငျ ကားဝယျပွီးတာနဲ့ ဆုံးသှားပါလိမျ့မညျ ကညန သိမျးပါလိမျ့မညျ။
၅။ ပွီးရငျ ကားရှဘေ့ကျပိုငျး ကားနောကျဖကျပိုငျး မီးခှကျနရောတှစေဈပါ မီးလုံး အရောငျတူညီမှု ရှိမရှိ နရောအထိုငျ မူလီတှေ မူလီရောငျဘဲ ရှိရပါမညျ ကားဆေး ကူးနခွေငျး လုံးဝမရှိစရေ မူလီက မူလီလိုဘဲ ညဈပတျလို့ ရပမေယျ့ ကားဘျောဒီ ဆေးမကူးစရေ
၆။ ကားဘီး သဲကာမြားသညျလညျး နဂို သဲကာအတိုငျးသာ ဖွဈရမညျဖွဈပွီး ညဈပတျနပေမေယျ့ သပျသပျ ရပျရပျ ရှိနရေပါမညျ။
၇။ အရေးကွီးဆုံးက ကား ရဲ့ အောကျပိုငျးနဲ့ အငျဂငျြခနျး က ဖရိနျတှသေညျ သနျ့ရှငျးနရေပါမညျ ။ အမြားစု သညျ ပုံမှနျအရောငျ ပုံမှနျကာလာဖွဈရမညျ ပွနျမှုတျထားပါက သူတဈနရောတညျးကှကျ ဖွူနတေတျပါသညျ။ ကှကျနတေိုငျး လညျးယူလို့ ရတာတှရှေိပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကားကောငျးရငျ ကောငျးတဲ့စြေး မကောငျးရငျ လညျး မကောငျးနဲ့စြေးဘဲ ပေးနိုငျဖို့ စဈခိုငျးတာပါ
၈။ လူတှသေတိမထားဘဲ ကြျောကြျောသှားတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ကား အစိတျအပိုငျး တှကေတော့ ကားခွနေငျးပွားအောကျ ကိုလှနျကွညျ့ဖို့ နောကျဖုံး အခငျးပွားအောကျ ခှာကွညျ့ဖို့ လုံးဝအားမနာပါနဲ့ အားနာ လို့ သံခြေး လိုကျနရေငျ ကိုယျ့လညျပငျး ကွိုးကှငျးစှပျပွီသာ မှတျလိုကျပါတော့ သံခြေး ရှိတဲ့ကား အလှနျဆုံး ၁ နှဈလောကျဘဲ ကောငျးမှာပါ
၉။ ကီလို မှနျမမှနျ စဈနိုငျဖို့ကတော့ အကွမျးအားဖွငျ့ မှတျသားရမှာကတော့ ကား ကီလို တှရေဲ့ အသကျက ဖငျထိုငျခုံနဲ့ စီယာရငျ ထိုငျခုံခါးပါတျလို့ အကွမျးဖွငျးမှတျပါ ၊ ကီလိုမြားရငျ အားလုံးနှမျးတတျပါတယျ ၊ ဒါပမေယျ့ တခြို့ ဂပြနျကား တှေ ကလညျး ဂပြနျကနောကျဆုံးပိုငျရှငျ အကိုငျအတှယျကွမျးတမျးရငျ ကီလို သုံးသောငျး နဲ့လညျး စုတျပွတျသတျနတောကို မွငျဖူးပါတယျ
၁၀။ တခြို့ကလညျး တိုကျကား ဘယျလိုခှဲမလဲ မေးကွပါလိမျ့မယျ ဂပြနျမှာ တိုကျကား အားလုံးကို Recondition လုပျပွီးရငျ ဒီအတိုငျး စဈလို့ မရတော့ပါ ဘာလို့ ဆိုတော့ တိုကျမိသမြှ ပကျြစီးသမြှ အကုနျအသဈလဲ လိုကျသောကွောငျ့ပါ ဒါကွောငျ့ ကနျဆယျလေးရှငျး အမှနျဆိုရငျ ကားဝယျယူသူတှကေ တနျဖိုးထားကွရတာပါ။
၁၁။ ဘာကွောငျ့ ကနျဆယျလေးရှငျး အမှနျတှေ ရောငျးကားထဲမှာ မရှိတာလဲ အမြားစုမေးပါလိမျ့မယျ ဘယျရှိမလဲဗြာ ကားတဈစီးကို စြေးနှုနျး နှိုငျးယှဉျပွီးဝယျတဲ့ တိုငျးပွညျမှာ ကနျဆယျလေးရှငျး အမှနျစြေးနဲ့ အစုတျအပွတျစြေး ဂပြနျမှာ တခြို့ဆို သိနျး လေးငါးဆယျ ကှာနတောမို့ ဘယျသူမှ ကားကောငျးကို သှငျးမရောငျး နိုငျတော့တာပါ … ဒါကွောငျ့ ကားကောငျးဆို စီးမယျ့ဆိုပွီးသှငျးတဲ့ လူတှေ ပွနျရောငျးမှသာ ရှိတော့တာပါ တကယျစီးမယျ့သူတှကေ သူတို့ကားကီလိုမြားရငျတောငျ မကွိုကျကွပါဘူး ကနျြတာဆို စဉျးစားမနပေါနဲ့…
၁၂။ ကားအရောငျ တနျးမှာ မွနျမာပွညျအကွိုကျက အပျေါဆုံး အမွငျ့ဆုံးစြေးက အဖွူ အမညျးပါ ပွီးရငျ ကွားအရောငျလို့ ချေါတဲ့ မိုးပွာတို့ ရှအေို တို့ လာပါတယျ ပွီးရငျ အရောငျပကျြလို့ ချေါတဲ့ ဓါတျတိုငျရောငျတို့ အပွာတောကျတောကျ အနီတောကျတောကျ အရောငျတှကေိုတော့ သခငျခဈြကား ခဈြလှနျးလို့ကိုယျ့နားက တျောတျောနဲ့ မသှားဘူး လို့ မှတျသားထားပါ အရောငျသတျမှတျခကျြကတော့ ကား တိုငျးအတှကျ တော့ မတူနိုငျပမေယျ့ အကွမျးဖငျြးကတော့ အရောငျတှကေို လိုကျပွီး စြေးနှုနျးက ၁၀ သိနျးလောကျ ကနေ ပိုကှာတာမြိုးတှလေညျးရှိပါတယျ ဓါတျတိုငျ Silver အရောငျပကျြ ဆိုပွီး 99 Surf တို့ 99 Prado တို့ကိုတော့ သှားမလုပျနဲ့နျော သူတို့ပုံစံ နဲ့ ငှရေောငျဆို ကောငျးတာမို့ အဲ့လိုကားတှမှောတော့ အရောငျပကျြလို့ မချေါနိုငျပွနျပါဘူး
၁၃။ ကား ၀ယျယူမညျ့လူတှကေို လှယျလှယျနဲ့ တှနျးရောငျးတတျတာလေး တဈခုကတော့ 2WD /4WD ကိစ်စပါ လိုအပျတဲ့လူအတှကျ လေးဘီးယကျဆိုတာ လိုပမေယျ့ လူ မြားစု နဲ့ ဆီစားနှုနျးသကျသာဖို့ အတှကျကတော့ လေးဘီးယကျတှဟော ဖွုတျမရဘဲ ၂၀ ကီလို နငျးမှ ပွုတျတဲ့ဟာ ဆိုရငျတော့ ဆီစားမယျ ၊ ပွနျရောငျးရငျ ခကျမယျဆိုတာကိုပါ လုံးဝတှကျထားပါ ကွမျးတမျးတဲ့ တောငျတနျး မွသေားလမျးတှအေတှကျ ( ကတ်တရာလမျးမပါ ) လေးဘီးယကျကားအသုံးဝငျပမေယျ့ မွပွေနျလမျးတှအေတှကျကတော့ မလိုအပျတာမို့ ဒီတဈခကျြကိုလညျး ခငျြ့ခြိနျပါ 2WD /4WD နှဈမြိုးရှေးခယျြခှငျ့ရှိတဲ့ ပုံမှနျ အိမျစီး ကားအမြားစုမှာ 4WD ကားတှကေ လလေံ မှာကိုဘဲ သိနျး 20 ကနေ သိနျး 40 လောကျထိ သကျသာ နတေတျတာကိုတှရေ့ပါတယျ.
၁၄။ ကား ကိုစဈရငျ နောကျခနျးလညျး ကနျြခဲ့တတျပါတယျ နောကျခနျးကိုလညျး သခြောစဈပါ ကား မှာပါတာ Orginal ဟုတျမဟုတျ သနျ့ရှငျးမှု ရှိမရှိ အသုံးပွုထားသေးလား ဘီး ဂြိုကျ ဂှ တှေ ပါတာတှပေေါ့ဗြာ … အမြားအားဖွငျ့တော့ ဂပြနျကလာရငျ အသုံးမပွုရသေးတာ မြားပါတယျ
၁၅။ ကား ကိုလညျး စဈပွီးပွီ စိတျတိုငျးကပြွီဆိုရငျတော့ မောငျးသာ စမျးပတေော့ နောကျဆုံးအဆငျ့ဆိုတော့ အားမနာပါနဲ့ ပိုကျဆံ ရိုကျထုတျတဲ့ စကျလညျး မိတျဆှတေို့ ဆီမှာ မရှိနိုငျပါဘူး ကိုယျ့ခြှေးနဲစာဆိုတော့ ထောငျ့စိအောငျတော့ စဈကွပါ။
၁၆။ နညျးမြိုးစုံ စဈလို့မှ ကိုယျကွိုကျနပွေီ ၀ယျခငျြတယျဆိုရငျ ရောငျးသူ အိမျကိုလိုကျပွီး စရံ ဒါမှမဟုတျ အကွေ ခလြေို့ရပါတယျ … စာရှကျစာတမျး ကို မသင်ျကာသေးဘူး ဆိုရငျ မွငျသာရုံး ဒါမှမဟုတျ သကျဆိုငျရာ ရုံးဝနျထမျးတှဆေီမှာ ကားစသှငျးတဲ့ ငယျရုပျ စဈပွီးမှသာ ငှေ ခပြေေါ့ဗြာ
နောကျဆုံး တဈခုက မနကေ့ ကြှနျတျော မိတျဆှေ တဈယောကျ ပွောသလို အမွငျဝယျရငျတော့ ကားကောငျးကောငျး ကွိုကျတတျရငျ စြေးကောငျး ကောငျးသာ မြှျောလငျ့ဖို့နဲ့ ကားကောငျးကောငျးရဲ့ အရငျးဟာ ကားစုတျ တဈစီးကို အမွတျတငျရောငျး ထားတဲ့ စြေးထကျတောငျ မွငျ့တတျတယျ ဆိုတာ နားလညျမှသာ ကိုယျသုံးမယျ့ ငှေ ကိုယျရမညျ့ ကားကို မှနျးနိုငျကွမှာပါ၊ အောကျတနျးစြေး တဈခုနဲ့ အထကျတနျးစား ကားတဈစီးကို ယဘေူယြ အားဖွငျ့ တော့ မရနိုငျကွပါဘူး။
ပေါခြောငျကောငျးလိုခငျြတဲ့လူတှနေဲ့ လောလော လောလော အလုပျ လုပျတတျတဲ့ ကားဝယျယူသူ တှဟော ကား တဈစီးကို စြေးတနျးမှနျမှနျ ကားမှနျမှနျမရတတျပါဘူး ဒါကွောငျ့ သတိထားကွပါ ကြှနျတျောအခု ပွောပွတာတှကေ ငှနေဲ့ လဲခဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံ စဈစဈတှကေို ပွောပွနတောပါ ထောကျခံစရာမလိုပါဘူး ငွငျးခုံလို့လညျး အကြိုး မရှိပါဘူး သူတပါးအကြိုးစီးပှားအတှကျ မိမိ အတှအေ့ကွုံ ကို နောကျလူတှေ မမှားစရေနျ ရညျရှယျပွီး ဒီစာကို အခြိနျပေးရေးသားပါသညျ မိတျဆှတေို့ သူတျောကောငျးတရား နရောတိုငျးမှာ ထှနျးကား ပါစေ. ခဈြခွငျးစတေနာ မတ်ေတာဖွငျ့ ဖွနျ့ဝပေါသညျ။